Gestational Diabetes (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gestational Diabetes (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို)
Gestational Diabetes (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို) ကဘာလဲ။
ဒီဆီးချိုအမျိုးအစားသည် ကိုယ်ဝန် ၂၄ပတ် ဝန်းကျင် မှသာ စဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်သော ဆီးချို သွေးချို သည် သင်၏ဆဲလ်များက သကြား (ဂလူးကို့စ်) သုံးခြင်းကို ထိခိုက်စေပြီး သွေးတွင်း သကြားဓါတ်ကို များစေ ပါသည်။ သွေးတွင်း သကြားပမာဏများခြင်း သည် သင်နှင့် သင့် ကလေးအတွက် မကောင်းပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သောဆီးချိုသွေးချိုတွင် သွေးတွင်း သကြားပမာဏ သည် မွေးဖွားပြီးသော အခါ ပုံမှန်သို့ ပြန်ရောက်သွားလေ့ ရှိပါသည်။ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင် စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချိုရှိပါက ဆီးချိုသွေးချို အမျိုးအစား၂ ပါရှိလာနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်အတူ သင့်၏ သွေးတွင်း သကြားဓါတ် ကို စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းပါ။
ဆီးချိုသွေးချို အမျိုးအစား၁ သို့မဟုတ် ၂ ရှိသော အမျိုး သမီးများသည် ကလေးယူရန် စဉ်းစားပါက ကိုယ်ဝန်မလွယ် မီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ကုသထားခြင်းမရှိသော (သို့) ကောင်းကောင်းမထိန်းချုပ်ထား သော ဆီးချိုသွေးချို သည် သင့်ကလေးအတွက် ပြင်းထန် သော ပြဿနာများကို ဖြစ်စေပါသည်။
Gestational Diabetes (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်သည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချိုသည် အမျိုးသမီး ၁၀ယောက်တွင် ၁ ယောက်ဖြစ်ပွားပါသည်။ အဝ လွန်သော အမျိုးသမီးများတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။ အန္တရာယ် ရှိသော အချက်များကို လျော့ချခြင်း အားဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ် နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက် များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Gestational Diabetes (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချိုသည် အများ အားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာ မပြပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးတွင်း သကြားပမာဏ စစ်သောအခါမှသာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချိုရှိကြောင်းကို သိရှိနိုင်ပါ သည်။
အမျိုးသမီးအချို့သည် သွေးတွင်း သကြားပမာဏ အလွန် မြင့်တက်လာသောအခါ ရောဂါလက္ခဏာ များပြပါ သည်။ ဥပမာ-
သို့သော်လည်း ဤလက္ခဏာများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အတွင်း အဖြစ်များပြီး ဆီးချိုသွေးချို ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဖြစ် နိုင်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာ ခံစားရသည်ဟု သံသယရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ဆီတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေပါက သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေပါက ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ ခန္ဓါကိုယ် တုံ့ပြန် မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း သည် သင်၏အခြေအနေကောင်းမွန်ရန်အတွက် အကောင်း ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Gestational Diabetes (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အင်ဆူလင်သည်အစာအိမ်နောက်တွင်ရှိသေ မုန့်ချိုအိတ် မှ ထုတ်လုပ်သော ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အင်ဆူလင် သည် ခန္ဓါကိုယ်မှ စွမ်းအင်အတွက် ဂလူးကို့စ် ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် ကူညီပြီး သွေးတွင်း ဂလူးကို့စ် ပမာဏကို လည်းထိန်းပေးပါသည်။
သို့သော်လည်း သင်၏ ခန္ဓါကိုယ်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အတွင်း လုံလောက်သော အင်ဆူလင်ကိုထုတ်မပေးနိုင် သော အခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို ကိုဖြစ်စေ ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်းတွင် ကိုယ်ဝန်သည် အမျိုးသမီး များသည် အင်ဆူလင် ခုခံမှုများ (အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို ခန္ဓါကိုယ်ဆဲလ်များမှ မတုံ့ပြန်ခြင်း) ပေါ်လာပါသည်။ သို့သော် အချို့အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ဝန်မရခင်ကပင် အင်ဆူလင် ခုခံမှုများ ရှိတတ်ပါသည်။
ထိုသည်မှာ အဝလွန်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင် အင်ဆူလင် လိုအပ်မှု မြင့်တက်ကာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်သော ဆီးချို သွေးချိုကို ဖြစ်စေပါသည်။
Gestational Diabetes (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို ဖြစ်ပွား နိုင်ချေ ကိုမြင့်စေသောအကြောင်းရင်းများ များစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်-
အဝလွန်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အရပ်နှင့် ကိုယ်အလေး ချိန်အညွှန်း (BMI) သည် ၃၀ နှင့်အထက် ရှိခြင်း
သားဥအိမ်တွင် အရည်အိတ်များဖြစ်သော ရောဂါ ရှိခြင်း
ဂလူးကို့စ်အသုံးမပြုနိုင်ခြင်း စသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ ရှိခြင်း
Glucocorticoid ( ပန်းနာရင်ကျပ်၊ မိမိခန္ဓါကိုယ်မှ ဆဲလ်များကို ပြန် လည် တိုက်ခိုက်သော ကိုယ်ခံအားစနစ်မှားယွင်းမှု ရောဂါ အတွက်) ၊ beta-blockers ( သွေးပေါက်တက်ခြင်း နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်ခြင်း အတွက်) ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက်သောက်ဆေး စသော ဆေးအချို့သောက်ခြင်း
အရင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို ဖြစ်ဖူးခြင်း
အရင်က ကလေးထွားထွား မွေးဖူးခြင်း
Gestational Diabetes (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကိုယ်ဝန် ၈ပတ်-၁၂ပတ် ဝန်းကျင် မမွေးခင် ရက်ချိန်းပြသမှုတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချိ ရှိသလား စစ် ဆေးရန် ဆရာဝန်သည် မေးခွန်းအချို့ မေးပါလိမ့်မည်။ သင့်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်စေသော အကြောင်း တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ရှိနေပါက အောက်ပါ စစ်ဆေး မှုများ ပြုလုပ်ရပါသည်။
အစပိုင်း ဂလူးကို့စ် ပေး၍ စစ်ဆေးခြင်း
သင်သည် ဂလူးကို့စ်အချိုရည် ကို အရင်သောက်ရမည်။ တစ်နာရီကြာသော် သွေးတွင်းသကြား ပမာဏကို တိုင်းရန် သွေးစစ်ခြင်း လုပ်ရမည်။
သွေးတွင်း သကြားပမာဏသည် ၁၃၀-၁၄၀ ( mg/dL) သို့မဟုတ် ၇.၂-၇.၈ (mmol/L) အောက် လော့နည်းပါက ဂလူးကို့စ်ပေး၍ စမ်းသပ်ခြင်းတွင် ပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
သွေးတွင်း သကြားပမာဏ သည် ပုံမှန်ထက် များနေပါက သင့်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို ဖြစ်နိုင်နှုန်း မြင့်ပါသည်။ ထိုရောဂါ ဖြစ် ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် ဂလူးကို့စ် ခံနိုင်အား စစ်ဆေး မှု ထပ်မံပြုလုပ်ရန်လိုပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ ဂလူးကို့စ် ခံနိုင်အား စစ်ဆေးမှု
သင်သည်တစ်ည အဆာခံရမည်။ ထို့နောက် သွေးတွင်း သကြားပမာဏ ကိုတိုင်းတာပါ။ ထို့နောက် ဂလူးကို့စ် အများကြီးပါသော အချိုရည် သောက်ပါ။
သွေးတွင်း သကြားပမာဏကို တစ်နာရီတစ်ခါဖြင့် သုံးနာရီကြာ စစ်ဆေးပါ။
သွေးတွင်းသကြား ပမာဏတိုင်းတာမှု အနည်းဆုံး နှစ်ခုတွင် ပုံမှန် ထက် များနေပါက ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် ဖြစ်သော ဆီးချို သွေးချို ရှိသည်ဟု အတည်ပြုနိုင် ပါသည်။
Gestational Diabetes (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချိုကို ကုသခြင်း သည် သင်၏ သင့်ကလေးကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါသည်။ ကုသမှု ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် သင်၏ သွေးတွင်း သကြား ပမာဏ ကို ပုံမှန်သို့ရောက်ရန် ကူညီပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု။ နေ့စဉ် အားကစား ကို အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ လောက်ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။ ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ ဆက်လက် လုပ် ဆောင်ပါက ဆရာဝန်နှင့် မေးမြန်းပါ။ ကိုယ်ဝန် ပထမ သုံးလပြီးနောက် နောက်ကျော လေ့ကျင့်ခန်း များ မလုပ်ပါနှင့်။
လိုအပ်ပါက အင်ဆူလင် ထိုးရမည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်သော ဆီးချိုသွေးချို ဖြစ်ခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီသောအစားအစာ။ အမျှင်ဓါတ် များပြီး အဆီ၊ကယ်လိုရီ နည်းသော အစားအစာ များ ကိုရွေးချယ်ပါ။ အသီးအနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် အစေ့အဆံများကို ဦးစားပေး စားသောက်ပါ။ အရသာ နှင့် အာဟာရ ကိုမတွေးဘဲ မျိုးစုံ စားကြည့်ပါ။ ဝေစု အရွယ်အစားကို ကြည့်ပါ။
တက်ကြွစွာနေပါ။ နေ့စဉ် ဖျက်လက်စွာ လမ်း လျှောက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ရေကူးခြင်း တို့ကို နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ခန့် ပြုလုပ်ပါ။ မိနစ် ၃၀ တစ် ခါတည်း မလုပ်နိုင်ပါက အချိန်တို အပိုင်းများခွဲ၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် အလေးချိန်လျော့ခြင်း။ ထိုသို့ လုပ်ခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင် ပို၍ကျန်းမာ စေသည်။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့သောအခါ နှလုံး ကျန်းမာခြင်း၊ အားအင်ပိုရှိခြင်း၊ မိမိ ကိုယ်ကို တန်ဖိုး ထားနိုင်ခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရမည် ကို မှတ်၍ မိမိကိုယ်ကို တွန်းအားပေးပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများ ရှိပါက သင့်အတွက် သင့်တော်သော အဖြေရှာဖွေနိုင်ရန် ဆရာဝန် နှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 7, 2017
Gestational Diabetes During Pregnancy. http://www.whattoexpect.com/pregnancy/gestational-diabetes/. Accessed September 03, 2016.Gestational Diabetes. http://www.diabetes.org/diabetes-basics/gestational/. Accessed September 03, 2016.